Manantial: waa maxay, sifooyinka, noocyada, dhirta iyo xayawaanka | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay guga
Adduunyada waxaa jira noocyo kala duwan oo biyo kaydinta ah. Mid ka mid ah ayaa ah guga. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa loo tixgeliyey meelo muqaddas ah dhaqammadii hore qaarkood. Waxaa jira ilo loo qeybiyay adduunka oo dhan mid walbana wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Intooda badani waxay leeyihiin astaamo caam ah waana taas in biyahoodu ay leeyihiin daahir heer sare ah.
Qodobkaan waxaan ku baran doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato gu'ga, astaamahooda iyo noocyadooda.
1 Waa maxay guga
2 Noocyada guga
3 Isticmaalka biyaha
4 Dhirta iyo xayawaanka
70% dhulku waa biyo. Cunsurkaan muhiimka u ah nolosha wuxuu ka muuqdaa gobollo kala duwan waxaana lagu qaybiyaa astaamo juqraafiyeed oo kala duwan. Biyahaas waxaa laga heli karaa badaha, harooyinka, wabiyada, sidoo kale waxaa lagu qaboojin karaa baraf-barafka. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale biyuhu waxay ku dhuumanayaan dhulka, biyo mareenka ama barkadaha dhulka hoostiisa. Fahmitaanka ilaha noocan ah waxay naga caawin doontaa inaan fahanno waxa ay yihiin guga guga iyo halka ay ka yimaadaan biyaha ka imanaya.
Biyaha guga waxay ka yimaadaan qulqulka biyaha dhulka ama dhagaxyada dhexdooda waxayna u baxaan dusha sare. Qaar ka mid ah biyaha guga ayaa ka soo baxa roobka, barafka, ama dhagaxyada jilicsan si ay u sameeyaan biyo kulul. Sidaa darteed, qulqulka ilaha qaar waxay ku xirnaan doonaan xilliga iyo roobka, taasoo keenta in ilaha ay sababaan biyuhu qallalaan xilliyada roobabku hooseeyaan. Taas bedelkeeda, kuwa badan oo taraafiko ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo dadweynaha deegaanka. Asalka biyaha guga ayaa ah waxa noo ogolaanaya inaan aasaasno noocyo kala duwan.
Astaamaha biyaha guga ayaa ah inay nadiif yihiin oo loo arko inay ku habboon yihiin cunnida aadanaha. Tani waa sababta oo ah biyaha waxaa si toos ah looga helaa kaydka dhulka hoostiisa. Waxa loogu yeero aquifer ayaa ka ciyaara door dabiici ah ilaalin si looga hortago in biyaha ay ku sumoobaan ilaha kale ee biyaha (sida webiyada ama badaha).
Si kastaba ha noqotee, biyahani waxay ku xiran yihiin xakamaynta tayada aadka u adag si loo cuni karo. Soosaarida iyo ganacsiga biyaha guga, shirkaddu waa inay ka diiwaangashan tahay Diiwaanka Nadaafadda Cunnada Guud ee ay maamusho AESAN (Hay'adda Isbaanishka ee Badbaadada Cuntada iyo Nafaqada). Iyadoo ay sidaas tahay, Spain weli waxay leedahay shirkado badan oo u heellan biyaha dhalada ku jira. Kaliya Castilla y León in ka badan 600 milyan oo litir oo biyo guga ah ayaa la dhalada sanad kasta, taas oo ka dhigan kaliya 10,5% wax soo saarka dalka.
Saddex nooc oo ilo ah ayaa lagu kala sooci karaa: sannado badan, gu'yaal iyo artesian. Xilliyada daba-joogga ah biyuhu waxay ka yimaadaan mool ka hooseeya miiska biyaha (aagga aaladda), halkaasoo qulqulka biyuhu si joogto ah u dhacayo.
Guga goos gooska ah biyuhu waxay soo baxaan marka heerka biyuhu u dhow yahay heerka biyaha dhulka; sidaa darteed, biyaheedu waxay qulqulaan oo keliya marka heerka biyaha hoose ay gaaraan heerkiisa ugu sarreeya, taas oo ah, xilliga roobka. Ugu dambeyntii, Ilaha farshaxanka waa ilo biyo-gacmeed oo dadku sameeyeen. Waxaa loo dhisay natiijada ka dhalatay qodista ceelasha dhaadheer, heerkooduna yahay biyaha dhulka hoostiisa ayaa ka sarreeya dhulka.
Waqtigan xaadirka ah, howlaha bini'aadamka awgood, isku ururinta biyaha dhulka hoostiisa ama biyo-mareennada ayaa si daran loo saameeyay. Ka faa’iideysiga xad-dhaafka ah ee biyaha dhulka hoostiisa ah ma helo waqtiga lagama maarmaanka u ah is-cusboonaysiinta, taas oo u tarjumeysa hoos u dhac ku yimaada xaddiga biyaha la heli karo.
Sidoo kale, ka faa'iideysiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira ayaa gebi ahaanba saameyn ku yeelanaya tayadiisa. Haddii xaaladdan ay sii socoto, waxaa laga yaabaa inaan daawanno biyo-yahannadan qaaliga ah oo qallalaya. Khubaro ku xeel dheer arimahan ayaa ka digay in hoos u dhaca ilaha biyaha dhulka hoostiisa mara ee laga heli karo ay tahay mid laga welwelo, oo qatar u leh malaayiin dad ah oo adduunka ku nool.
Waa inaan ogaanno guga inuu leeyahay astaamo u gaar ah oo ka dhigaya nidaam deegaan oo yar oo leh qiime bayooloji sare. Aan aragno waxa xaaladaha gaarka ahi yihiin:
Waxay ku yaalliin gudaha buuraha dushooda iyo sagxadaha dooxooyinka ama qaabab la mid ah. Badooda ayaa sidoo kale ka soo muuqan karta xagga hoose.
Waxaa la abuurey markii kayd biyood hoose ay buuxsamaan taas oo ka dhalatay soo gelitaanka biyaha. Biyahaani waxay ka yimaadaan roobab badan oo ka da’aya gobol.
Isha noqon karaa mid joogto ah iyo mid waara waxay kuxirantahay nooca dhulka iyo dhagaxa sameeya. Dhagaxu wuxuu sifeyn karaa qadar biyo ah ama kayar. Sidoo kale waa inaad falanqeysaa xaddiga biyaha ay ka hesho haanta dib u soo cusbooneysiineysa.
Meelaha kulul waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay yihiin ilo. Waxa kaliya ee lagu kala duwan yahay ayaa ah in biyuhu ka badnaan karaan 40 darajo heerkul ahaan.
Si biyaha looga cuno guga, habka daaweynta biyaha waa in marka hore la sameeyaa. Marka biyaha guga ay gaaraan warshadda daaweynta ee la soo ururiyay iyo / ama laga soo saaray deegaanka dabiiciga ah, habka beddelku wuxuu bilaabmayaa. Marka hore, walxaha ugu waaweyn waxaa laga saaraa miiraha ciidda. Marxaladda xigta, biyuhu waxay marayaan miiraha kaarboon-ka, halkaas oo koloriin looga soo saarayo nuugista, taasoo ka dhigaysa inay biyuhu nadiif noqdaan. Mar dambe, habka UV waxaa loo hawlgeliyaa in jeermiska lagu dilo biyaha iyadoo la raadinayo sheybaarro ama bakteeriyo suuragal ah.
Dhirta iyo xayawaanka
Springs ma aha aagga leh kala duwanaanta noolaha ugu weyn. Biyaha daba dheeraada ayaa badanaa hoy u ah kalluunka biyaha saafiga ah, oo ay ku jiraan kalluunka. Qaar ka mid ah ambiibiyiinta iyo xamaarato ayaa wakhti dheer ku sii jiraya, naasleyda iyo shimbiraha ayaa u imaan kara inay biyo cabaan, naftooda cusbooneysiiyaan ama quudiyaan. Cayayaanka ayaa aad ugu badan deegaanadooda.
Ilo biyoodyo waaweyn ayaa taageeri kara noocyo kala duwan oo nolosha ah. Kuwa kale, ujeedo urursiga kaarboon dioxide ama macdanta biyahooda darteed, ma taageeri karaan nolosha kalluunka ama xayawaanka kale, laakiin waxay ku jiri karaan bakteeriya iyo noole kale. Marka laga hadlayo dhirta, waxaa hareerayn kara ku dhowaad nooc kasta, oo ay ku jiraan kaymaha iyo dhul-daaqsimeedka, maxaa yeelay iyagu kuma koobna noolaha ama deegaanka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto waxa gugu yahay iyo muhiimadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Waa maxay guga
Aqoontaas oo aan guud ahaan garanayn waa mid aad u qiimo badan oo xiiso leh, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii waddo hodantinimada aqoontan Dabeecadda Hooyo ee ay tahay inaan u ilaalino jiilalka cusub ...